प्रदेशसभाले अब प्रदेशको नामाङ्कन पनि गर्नु पर्दछ | NewsMissile.com
प्रदेशसभाले अब प्रदेशको नामाङ्कन पनि गर्नु पर्दछ
Newsmissile January 28, 2018 राजनीति, विचार, समाचार0Comment
संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी प्रदेश सभाका माननीयहरुले माघ ७ गते सपथ ग्रहण गरे पश्चात अव प्रदेश सभाले के गर्छ ? कसरी प्रदेशले आफना कार्यहरु लाई लैजान्छ भने विषयमा प्रदेश नं. ३ का सभासद माननीय प्रकाश श्रेष्ठ (काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ७ ख) संग न्यूज मिसाइल का सम्पादक सानुराजा पुरी संगको कुराकानी:
 प्रदेशको काम अव के हुने छ ?
माघ ७ गते सपथ ग्रहण गरे पश्चात अबको २० दिनमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रदेश प्रमुखले बोल्नु पर्ने प्रावधान सविधानको धारा १८३ मा व्यवस्था गरिएको छ। सोही बमोजिम प्रदेश प्रमुखले संसदको आव्हान गरेपछि केही कार्य अगडि जानेछ।
 प्रदेश संसदको आव्हान पछि के हुन्छ?
प्रदेश सभाको संसदले पहिलो काम सभामुख, उपसभामुख चयन गर्ने छ। त्यस पछिका दिनमा संविधानको १६८ को प्रावधान बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन प्रक्रिया शुरु हुनेछ। बहुमत प्राप्त दलका संसदीयको नेतालाई मुख्य मन्त्री र उसको अध्यक्षतामा अन्य मन्त्री हुनेछन्।
प्रदेश राजधानीको विषयमा धेरै टिकाटिप्णी भएको छ ,प्रदेश न. ३ को राजधानी हेटौडा भएन भनिएकोछ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
प्रदेश राजधानीको विषयमा धेरै हल्लाखल्ला गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संविधानको धारा २८८(२) मा प्रष्ट लेखिएको छ प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले जुन स्थानलाई प्रदेश राजधानी तोकियो सोही कायम हुने हो । हाल सरकारले काम कार्य संचालनको लागि अस्थाई मुकाम मात्र तोकेको हो। प्रदेश सभाले अब प्रदेशको नामाङ्कन पनि गर्नु पर्दछ । सधै १,२,३ प्रदेश भनेर हुदैन।
 त्यसो भए तपाई प्रदेश नं ३ को सभासद ३ नं प्रदेशको नाम के राख्ने ?
मेरो विचारमा संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ त्यसो भएकोले प्रदेश नं ३ को नाम वागमती प्रदेश, नेपाल मण्डल, कान्तिपुर प्रदेश मध्ये एक राख्दा फरक पर्दैन ।
प्राकृतिक हिसावले ऐतिहासिक हिसावले वा भाषा भेषभूषा वा जातीय के हिसावले राख्ने हो त्यसको मापदण्ड तयार गरेर नामाङ्कन गर्ने हो सबै सभासदको सहमतीमा गर्न सकिन्छ।
 उही पुरानो कुरा भएन र प्रदेश राजधानी पनि जनतालाई पायक परेन भनिन्छ ? पायक पर्ने स्थान कुन हो त ?
कुरा पुरानो होइन हामीले चयन गर्ने नामको आधार तयार गर्नु पर्दछ । त्यसले सहि समाधान गर्न सक्दछ । हो सरकारले तोकेको अस्थायी मुकामलाई प्रदेश वनाउन सकिन्छ। तर ती स्थानमा धेरै पूर्वाधारका कमि छ ति ठाउँहरुमा पूर्वाधार तयार गर्न धेरै खर्च हुन्छ तसर्थ हाल पूर्वाधार भएका स्थान एवं सबै जनतालाई पायक पर्ने स्थान हुनु पर्दछ ।
 प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौडा ठिक छैन त ?
हेटौडालाई सरकारले अस्थाई मुकाम तोकेको हो । हामी शपथ ग्रहण गर्न जादैनै धेरै माननीयहरुले यो प्रदेशको राजधानी जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा भएन भने कुरा आएको थियो। अब प्रदेश राजधानी भक्तपुर, बनेपा मध्ये कुनै एक स्थानमा राख्नु पर्छ भने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो। सम्भवत भोलिका दिनमा यसको सम्बोधन यहि रुपमा हुनेछ ।
 जनताले आशा गरेको विकास निमाण कहिले होला त ?
हामी एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा प्रवेश गरेका छौ । संघीयता हामीलाई नौलो अभ्यास हो । तसर्थ विकास हुन्छ अब हामीले आर्थिक विकासमा जोड दिनु पर्दछ। अवश्य पनि जनताको अपेक्षा बमोजिम कार्य गर्न ढिला भएको छ हामी जनताको काम गर्न लाग्ने छौ ।
Previous भत्ता बढाउने निर्णयले वित्तिय संकट आउन सक्ने
Nextमन्त्रालय धर्नादेखि “नो भोट” सम्मको संघर्षमा तिङ्लाबासीकै जीत